Wakiilada Beesha Caalamka oo kulan Deg-deg ka leh xaaladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wakiilada Beesha Caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa xiligaan waxaa uu kulan uga socdaa Xerada Xalane ee ku dhex taalla Garoonka diyaaradahha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee Cakiran dalka, xiisada soo korortay ee Magaalada Muqdisho iyo khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada dhaceysa oo weli aan heshii laga gaarin.
Wakiilada Beesha Caalamka ee loo yaqaano C6+ ayaa sigaar ah uga arrinsaneysa sida lagu xalin karo xiisada siyaasadeed ee dalka, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda War-saxaafadeed kasoo saaran kulankooda, kuna wajahan xaaladda dalka.
Kulan ayaa waxaa uu kusoo beegmay, kaddib markii shaqaaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac sababay ay shalay iyo habeen hore ka dhaceen Muqdisho, iyadoo Ciidamada dowladda ay weerareen hotel ay daganayeen Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif.
Dhinaca kale rasaas xoogan ayaa lagu furay bannaanbaxayaal ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah Midowga Musharaxiinta oo ay kamid ah yihiin C/raxmaan C/Shkuur Warsame, iyadoona dowladda is hor istaag ku sameeysay banaanbax ay dhigi lahaayeen Musharaxiinta, kaasi oo looga horjeeday Farmaajo.